Tababaraha Xulka Qaranka France Oo Shaaciyey In Antoine Griezmann Aanu Ku Faraxsanayn Antoine Griezmann - Gool24.Net
Tababaraha Xulka Qaranka France Oo Shaaciyey In Antoine Griezmann Aanu Ku Faraxsanayn Antoine Griezmann
Antoine Griezmann waxa uu hadda ku sugan yahay oo uu la joogaa xulka qaranka France ee isku diyaarinaya kulamada caalamiga ah ee dhamaadka usbuucan iyo toddobaadka dambe, waxaana wajigiisa ka muuqata in aanu ku faraxsanayn naadiga uu ka tirsan yahay ee Barcelona, sida uu sheegay tababare Didier Deschamps.
Weeraryahanka reer France ayaa xili ciyaareed adag ku qaatay Camp Nou, kaas oo uga beddelnaa waqtigiisii Atletico Madrid oo uu ahaa ciyaartoy saamayntiisa ciyaareed badan tahay.
Sida uu sheegay Didier Deschamps, Antoine Griezmann ma dareemayo in Barcelona uu ku helayo jawi farxad u abuuri karaya oo ka duwan sidii hore, xilli ay kooxdaasi yeelatay macallin cusub.
“Waxa aan ku qanacsanahay in aanu ku faraxsanahay xaaladdiisa hadda ee Barcelona. Haddii uu warbaahinta wax u sheegana, waxay ila tahay in taasi ay ka cadhaysiin doonto Ronald Koeman.” Sidaas yidhi tababaraha xulka qaranka France ee Deschamps.
Tababaraha Faransiiska oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaa ku daray: “Ma doonayo inaan ka hadlayo waxa ka dhaca koox, laakiin Griezmann waqtigan waxa uu ka ciyaaraa garabka midig, waxaanan fahmi la’ahay sababta uu dhexda hore uga ciyaari la’yahay.”
Deschamps waxa uu Griezmann ka ciyaarsiiyaa weeraryahanka labaad isaga oo ku xiga Olivier Giroud ama Kylian Mbappe waxaanay taasi keentaa inuu dhaliyo goolal muhiim ah, bandhig fiicanna muujiyo.
Ciyaartii ugu dambaysay ee uu Barcelona u saftay waxay ahayd kulankii ay barbarraha 1-1 wada galeen Sevilla, waxaana la sheegay in wajiga Antoine Griezmann laga dareemayay in aanu faraxsanayn, waxaana Deschamps oo arrintan soo qaaday uu yidhi: “Waxa uu helay laba fursadood, ciyaartoy tayadiisa lehna waxay ahayd inuu midkood dhaliyo.”